२०७८ पौष २८ बुधबार १४:१०:००
नेकपा एमाले पर्साको आठाैँ जिल्ला अधिवेशनको बन्दसत्र अन्तिम चरणमा आएर स्थगित भएको छ । मंगलबार साँझ ६ बजेदेखि सुरु भएको बन्दसत्रमा राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रतिवेदन र आर्थिक प्रतिवेदन संशोधनसहित पारित भएर बन्दसत्र स्थगित भएको हो ।
बन्दसत्रमा नेकपा एमाले अध्यक्ष प्रभु हजराले राजनीतिक प्रतिवेदन, सचिव मनोज गुप्ताले सांगठनिक प्रतिवेदन र सन्तोष पासवानले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको नेकपा एमाले वीरगन्ज महानगरपालिकाका उपाध्यक्ष महेश दासले जानकारी दिए । उनका अनुसार आठाैँ जिल्ला अधिवेशनको बन्दसत्रमा नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा सहमति नभएपछि बन्दसत्र स्थगित भएको हो ।
एमाले पर्साको करिब १२ वर्षपछि भएको जिल्ला अधिवेशनको बन्दसत्र नेताहरूकै कारण स्थगित भएपछि अधिवेशन प्रतिनिधिहरू असन्तुष्ट बनेका छन् ।
स्रोतका अनुसार बन्दसत्रमा अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरू मंगलबार राति ११ देखि ४ बजेसम्म अधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मागअनुसार निर्वाचन गराउन सहमत नभएपछि बन्दसत्र स्थगित गरिएको हो ।
रातिको समयमा ६ घन्टासम्म अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरूले बन्दसत्रबाट बाहिर आउने–जाने मात्र गरेपछि आक्रोशित भएका अधिवेशन प्रतिनिधिहरूले होहल्ला गरेपछि एमाले पर्साका सचिव गुप्ताले बन्दसत्र स्थगित भएको सहभागीहरूलाई जानकारी गराएका हुन् । स्थगित भएको अधिवेशनबारे अध्यक्षमण्डलको सहमतिपछि अधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई जानकारी गराइने सचिव गुप्ताले बताए ।
एमाले पर्साका अध्यक्ष प्रभु हजाराले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विशेष कारणले एमाले पर्साको जिल्ला अधिवेशन स्थगन भएको बताएका छन् । उनले बन्दसत्रको कार्यक्रमबारे पछि सूचना जारी गरेर जानकारी गराइने पनि बताएका छन् ।
किन भयो बन्दसत्र स्थगित ?
नेकपा एमालेको दशाैँ महाधिवेशनपछि अहिले पर्सामा गुटउपगुट नभएको एमालेका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा दाबी गर्दै आएका छन् । तर, एमाले पर्सामा अहिले पनि खुला रूपमा दुई गुट स्पष्ट रहेको कार्यकर्ताहरूले बताउने गरेका छन् ।
बन्दसत्रको अध्यक्षमण्डलमा नेकपा एमाले पर्साका अध्यक्ष एवं केन्द्रीय सदस्य प्रभु हजरा अध्यक्ष रहने गरी केन्द्रीय सदस्य निर्मला देवकोटा, अरविन्द सिंह, राजकुमार गुप्ता र प्रदेश २ का अध्यक्ष राजनारायण यादव थिए । बन्दसत्रको अध्यक्षमण्डलमा रहेका पर्साकै चारजना केन्द्रीय सदस्य दुई गुटमा विभाजित छन् ।
स्रोतका अनुसार अध्यक्षमण्डलका अध्यक्ष हजराले रातिको बन्दसत्रमा केही नेताहरूको कुरामा लागेर बाहिर आउने–जाने मात्रै गर्ने र प्रतिनिधिहरूलाई रोक्न खोजेपछि सामान्य झडप पनि भएको थियो ।
प्रतिनिधिहरूले अध्यक्षमण्डललाई सर्वसम्मत गर्न नदिने गरी अडान लिएपछि बन्दसत्र स्थगित भएको महाधिवेशन आयोजक कमिटीका एक सदस्यले बताए ।
उनका अनुसार एमाले अध्यक्षमण्डलका अध्यक्ष नै नेताहरूको प्रभावमा परेर बन्दसत्रबाट बाहिर आउजाउ गरेपछि विरोध भएको हो । अधिवेशनमा जिल्लाका सात सय ८५ जना अधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
बन्दसत्रमा नेकपा एमाले प्रदेश २ का इन्चार्ज रघुवीर महासेठ र सहइन्चार्ज सुमन प्याकुरेल, पोलिटब्युरो सदस्य प्रभु साहलगायत सहभागी थिए । मंगलबार बिहान नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन गरेका थिए ।
काठमाडौं महानगरपालिका १ मा नेकपा एमालेका भरतलाल श्रेष्ठ विजयी
विराटनगर महानगरमा एमालेबाट उपमेयरकी उम्मेदवार कार्कीद्वारा राजीनामाको किर्ते कागजात पेस !
एमाले रामेछापले टुंग्यायो सबै पालिका प्रमुखका उम्मेदवार